Munamato kuSan Martín de Porres. ? ZveMhuka uye Vanorwara.
Munamato kuna Mutendi Martin wePorres, chombo chine simba chiri mumaoko evanhu vanochengeta kutenda kwakasimba uye kune hutano. The munamato San Martin de Porres Iyo inomiririra ruponeso mune dzakawanda zvekurapa zviitiko uye zvinosanganisira vanhu vara.
Paakanga achiri mupenyu, zvaibatsira kune avo vaiiswa muchipatara nezvinetso zvakakomba zvehutano.
San Martín de Porres musande anonyanya kuzivikanwa muSouth America nekuda kwezvakawanda zvishamiso zvinotaurwa kwaari nguva refu asati arohwa.
1 Munamato kuna Saint Martin de Porres Ndiani Saint Martin de Porres?
2 Namata kuna San Martín de Porres wemhuka
3 Munamato kuna San Martín de Porres kune vanorwara
3.1 Ndogona kunyengetera rini?
Munamato kuna Saint Martin de Porres Ndiani Saint Martin de Porres?
Iye akazvarwa muRima, Peru mugore ra1579, ndiye dangwe pahama mbiri, baba vake vePeru naamai vake mukadzi weganda roruvara akazvarwa muPanama.
Paasina kugamuchirwa nemhuri yake yemababa, akasiiwa ari muchitokisi chaAmai Isabel García, vaigara muSan Lázaro, muguta rinogarwa nevanhu verudzi.
Achiri mudiki akatanga kudzidzira seanopenga uye kubva ipapo akatanga kudzidza kwake kukuru nyika Zvemushonga.
Akatanga gadziriro yake yechitendero muDominican Convent Mukadzi wedu weRosary asi iye airambwa zvakanyanya nekuda kwe mulatto toni yeganda rake.
Nekudaro, Martin akaramba akasimba mune zvaaiita, aipinda minamato pakutanga uye haana kuregera chero zviitiko zvake, achiva muenzaniso kune vamwe.
Chipo chake chekuporesa chakaonekwa muvanhu nemhuka, vese varwere Martin akarapwa vakagamuchira kurapwa, mune dzakawanda nguva, nekukurumidza.
Izvi zvakamuita kuti awane kumberi mukurumbira uye atove airwara aida kuchengetwa naye.
Zvinonzi, kunze kwechipo chekuporesa, vamwe vamwe vakapihwa kwaari, sekuchipo chendimi uye kunyangwe chipo chekubhururuka.
Namata kuna San Martín de Porres wemhuka
Komborera iwe, Mwari Wemasimbaose, musiki wezvisikwa zvese zvipenyu.
Nezuva reshanu nerechitanhatu rekusika, Iwe wakasika hove mumakungwa, shiri dziri mumhepo uye mhuka dzepanyika.
Wakafuridzira San Martín de Porres kufunga mhuka dzose sehama nehama dzake. Tinokumbira kuti muropafadze mhuka iyi.
Nesimba rorudo Rwako, bvumidza [mhuka] kurarama maererano neChido chako.
Inorumbidzwa nguva dzose nekuda kwekunaka kwese kwechisikwa Chako. Wakaropafadzwa iwe, Mwari Wemasimbaose, mune zvese zvisikwa zvako!
Namata Saint Martin de Porres munamato wemhuka nekutenda.
Bvunza hutano hwezvipfuyo zvedu chiito cherudo kuti vanhu vazhinji vanofunga kutambisa nguva.
Zvipfuyo zvedu uye izvo zviri mumugwagwa, zvisinei nekwavo kana mhuka, mumwe nemumwe wavo ane mubatsiri muSan Martín de Porres uyo anogona kuvapa hutano kuitira kuti vave nehupenyu hwakanaka.
Munamato kuna San Martín de Porres kune vanorwara
Anodiwa San Martin de Porres.
Chiedza chavanozvininipisa, vatsvene vekutenda kukuru, kwauri iwe Mwari kwavakapaita zvishamiso zvisingafungidzirwe, nhasi ndauya kwauri mune izvi zvinodiwa uye kusuwa kunondikurira.
Iva mudziviriri wangu uye chiremba wangu, murevereri wangu uye mudzidzisi wangu munzira yerudo kuna Kristu.
Iwe iwe nekuda Mwari uye nehama dzako, waigara usina kuneta kubatsira avo vanoshayiwa, zvakanyanya zvekuti zvinozivikanwa kuti Mwari vakupa simba rekuve panguva imwechete munzvimbo dzakasiyana, teerera kune avo vanoyemura kunaka kwako, nekuda kwerudo rwaKristu.
Ndinovimba kubatana kwako kune simba naMwari kuti, kana uchireverera pamberi paIshe, kuti pamberi pemweya yakachena senge zvese zvakanaka, zvivi zvangu zvicharegererwa uye ndinosunungurwa kubva kune yakaipa uye munjodzi.
Ndiudze mweya wako wetsitsi uye webasa kuti ndikwanise kukushandira nerudo ndakaiswa kuhama dzangu uye kuti uite zvakanaka.
Zvandinowana senge iwe, sei, kuitira vamwe zvakanaka, kuchema kwangu kwakasununguka.
Dai muenzaniso wako wekuzvininipisa wekuva newe, nguva dzose munzvimbo yekupedzisira, uve kwandiri mwenje kuti ndisambokanganwa kuzvininipisa.
Dai ndangariro dzekutenda kwako kukuru, iyo inokwanisa kupodza, kumutsa, nekuita zvishamiso zvakawanda, ive yangu munguva yekusahadzika, inyasha dzakasimudzirwa dzinozadza moyo wangu nemoto weRudo rusina magumo kuna Kristu.
Baba Vekudenga, neruoko rwemuranda wenyu akatendeka Martin Martin, ndibatsireiwo mumatambudziko angu uye regai tariro yangu ivhiringidzwe.
Ishe Wedu Jesu Kirisito, uyo akati "kumbira uye uchagamuchira", ndinokukumbirisai nekuzvininipisa kuti, kubudikidza nekureverera kweSande Martin de Porres, munzwe chikumbiro ichi.
Ini ndinokumbira kubva parudo, ndipeiwo nyasha dzandinobvunza kana zviri kuitira mweya wangu.
Ini ndinokumbira izvi kubudikidza naJesu Kristu, Ishe wedu.
Munamato uyu weSanta Martin de Porres kune vanorwara unoshamisa!
Nguva dzose pfuura nechirwere Ndiyo imwe yemaitiro akaomarara zvekuti zvese zvipenyu zvinoitikaMuvanhu zvakafananidzirwa nerufu sezvo zvirwere zvakawanda zvisina kurapa nesainzi.
Nekudaro, pane chombo chine simba chiri rutendo chinoshanda kuburikidza nemunamato.
Iwe unogona kukumbira kuporeswa kwechirwere chero chipi zvacho nguva dzose, vatsvene uye kunyanya San Martín de Porres vari kuda kutibatsira uye kutipa kurapa kwemiviri yedu kana yemumwe wemhuri kana shamwari inoda chishamiso.
Ndogona kunyengetera rini?
Minamato inogona kuitwa nguva dzese zvisinei nenzvimbo kana mamiriro.
Vamwe vanhu vanowanzogadzira atari yemhuri mavanosimudza minamato mangwanani uye mukati mezuva rese, mhuri dzinonamata pamwechete dzinofarira kuzviita panguva yekudya kwemangwanani, zvichiita kuti ive nezuva rakaropafadzwa uye rakachengetedzwa.
Gadzira mitsara mu novenas kana kunamata el rosario kukwana kuSan Martín de Porres unogona kuva mutsauko wekuona chishamiso muhupenyu hwedu.
Asi izvi zvese zvinofanirwa kuitwa tichitenda kuti acharamba achititeerera nguva dzese, kana zvisiri saka tichange tichitambisa nguva sezvo munamato uchinge usati wasvika padenga reimba.
Icho chombo chine simba asi kuziva mashandisiro azvinoita uye pamusoro pezvose, uchigara uchiyeuka kukutenda nekuda kwechishamiso iwe chawakatipa.
Ndinovimba unowana rubatsiro rwaunoda nemunamato weSan Martin de Porres.
Munamato weSanta Helena
Wakasimba munamato weSan Alejo